Ny firaisana ara-nofo: Ahoana no mba hiresaka momba izany ao amin’ny mampiaraka toerana
Raha ny fanadihadiana dia nentina nivoaka, miaraka amin’ny mpampiasa ny lehilahy mampiaraka toerana, momba ny foto-kevitra fa izy ireo dia toy ny hafa mba hiresaka ny amin’ny vehivavy, horonan-tsary ireo fivoriana, ny voalohany dia mety ho: Miresaka momba ny firaisana ara-nofo amin’ny vehivavy. Be dia be ny olona hifidy, ary maro ny olona maty eo amin’ny fanatanjahan-tena ity. Avy eo, dia te-haka ny fotoana amin ity vehivavy ity, dia nanao ny zava-drehetra dia mety latsaka ao anaty rano, satria ny foto-kevitra. Efa matetika ny valin’io fanontaniana io, dia tonga voalohany indrindra avy amin’ny ny mpianatra:»Ahoana no ahafahako miresaka momba ny firaisana ara-nofo eo amin’ny toerana mampiaraka?». Handeha aho namaky ity lahatsoratra ity mba hanome anareo teknika ny dredge vonona ny hampiasa, dia avy eo tsy maintsy miresaka momba ny firaisana ara-nofo tsy mandeha ho lehibe mavesatra! Amin’ny fifandraisana amin’ny vehivavy, dia tena zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba bounce amin’ny tsirairay ny didim-pitsarana. Izany no fomba tsara indrindra mba hamorona ny mahaliana fifanakalozana. Hanadino ny rehetra ny trite fanontaniana ao amin’ny lohany, hijery izy, ary ny fanahy masina dia hitarika anareo eo amin ny fifanakalozan-kevitra mba hahazoana fotoana. Mba hiresaka momba ny firaisana ny vehivavy iray dia kely ny zavatra toy izany. Ataovy ao an-tsaina izany hevitra izany, ary ianao dia ho afaka ny hahazo ny tsara teny fanalahidy mba hitarihana ny fifanakalozan-kevitra araka izay irinao. Tsy maintsy mandalo maka ilay baolina any amin’ny dingana lehibe, toy ny ela dia ho toy ny teny avy amin’ny lexical sehatry ny firaisana ara-nofo, na ny firaisana ara-nofo hita, re-manao izany. Ao amin’ny ohatra etsy ambony, dia m manoratra ny fehezan-teny amin’ny teny hoe»Fantasy». Izany teny, ny zava-misy dia mamela ahy mba hiverina avy hatrany ka manomboka miresaka momba ny firaisana ara-nofo: Tsy marina izany didim-pitsarana izay toa ny fiandohan’ny fifanakalozana be dia be ara-nofo kokoa noho ny sisa amin’ny fifanakalozan-kevitra. Izy no mampiseho ahy ny mariky ny open-tenanareo amin’ny ny valin -! Izany tamiko no manan-kery amin’ny fotoana izay miresaka momba ny firaisana ara-nofo amin’ny mampiaraka toerana noho izany dia tsy misy olana. Na izany aza, dia tsy tokony hanao fahadisoana ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo amin’ny fomba mahery setra loatra, izany dia tsy miasa. Na dia, raha izy manome ahy ny maitso mazava, tsy maintsy manohy ny hiakatra ao amin’ny lexical sehatry ny firaisana ara-nofo, ary dia manorata fehezanteny izay mahatonga ny sary ao aminy ny manaitaitra. Miresaka momba ny firaisana ara-nofo amin’ny vehivavy dia vao ny zavatra Aza ny sasany dia misokatra kokoa noho ny hafa, ireo rehetra manana faniriana ny ho faly. Ny fitsipika maro ianao rehefa miresaka momba ny firaisana ara-nofo dia ny mijanona an-kolaka. Tsy maintsy ho fahafinaretana ho azy mba hizara aminareo ny momba ny firaisana ara-nofo. Raha tsy izany no nitranga ary ianao mampiseho ny sasany ratsy famantarana, ajanony ny lohahevitra.
Nampiasa izany mba hitandrina sexualizing ny fifanakalozan-kevitra. Raha mbola mitoetra ao amin ny lexical an-tsaha aho, dia hitandrina ny mavitrika amin’ny fitenenana ny fandroana na ny fandroana. Tsy maintsy mijery lavitra hijanona ny mazava ho azy mba hanohy ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo amin’ny ankizivavy. Koa, mitandrema mba tsy ho mavesatra, izany dia tena zava-dehibe eo amin’ny dingana ity mba hitandrina ny fitaka.
Ny tanjon ny dating site dia mba mihaona
Na ianao mitady fifandraisana lehibe fotsiny ny fahazavana ny filalaovana fitia, miresaka momba ny firaisana ara-nofo ianao, dia omeo ny hafa tari-dalana ho an’ny fotoana voalohany. Ny resaka momba ny firaisana ara-nofo notanterahina araka ny tokony ho izy dia hamela anao mba hamorona ny fifandraisana ara-batana miaraka amin’ny ankizivavy haingana kokoa (ny saina-dia tsy handeha tsy toy ny bibidia, dia manaja ny vehivavy amin’ny toe-javatra rehetra).
Mbola sexualizing ny adihevitra mandra-ny fanendrena
Raha toa ianao ajanony tampoka loatra ny haingana ny fifanakalozan-kevitra, dia mety ho ny rano mitete avokoa ny fampiononana ny firaisana ara-nofo dia efa voapetraka. Ho playful, no kendrenao miaraka amin’ny fotoana mahafinaritra, tahaka ahy ao amin ny fifanakalozan-kevitra eo nolaniana efa: afaka manampy ny mikasika ny hehy rehefa miresaka momba ny firaisana ara-nofo. Tsy voatery misy ny manao remake ny boky, dingana Fotsy. Ataovy ao an-tsaina fa tokony hijanona ny tena fahafinaretana indrindra ho azy. Dia mbola ho anao nanangana ny fanendrena sy handray ny isa an-tariby. Izao fa manana ny teknika ny dredge mba hahomby amin’ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo amin’ny vehivavy iray, dia tsy maintsy manomboka fotsiny. Dia ho azo antoka fa miatrika zava-tsarotra, hizara ahy, izaho dia hanampy anao hanatsara ny tenanao. Enga anie ianareo rehetra ny fanendrena tsara mafana, ary ianao no manomana taratasy ao amin’ny: Ahoana no mba hiala celibacy! Eo an-tanako coaching Famitahana, mijery ny toerana tsy manaiky mofomamy, Fa nahoana? Manaiky Izahay, mampiasa cookies mba hanome anao ny tsara indrindra browsing traikefa izay azo atao. Raha toa ka manohy mampiasa ity toerana raha tsy misy ny fanovana ny mofomamy toe-javatra na tsindrio eo amin’ny ‘Ekeo’ eto ambany, ianao manaiky izany. Isika, dia tsy hampiasa ny mombamomba anao na misy endrika mitsangatsangana mpampiasa ao amin’ny toerana ity
← Mampiaraka ho an'ny fifandraisana matotra